Alohan'ny hahitan'ny fanahy dia tsy maintsy tratrarina ny firindrana ao anatiny ary ny maso ara-nofo dia jamba ny sain'olombelona rehetra.
Ity tany ity, Disciple, dia ny Hall of Sorr, izay napetraka tamin'ny lalan'ny fizahan-toetra mahatsiravina, fandrika mba hamandrihana ny Ego anao amin'ny mamitaka antsoina hoe "Heresy Heresy (Separateness.")
Vol. 1 FEBROARY, 1905. Tsia
NY fanahy dia fivahinianana mandrakizay, hatramin'ny taloha ka hatramin'ny farany, mankany amin'ny hoavy tsy mety maty. Amin'ny fahatsiarovan-tena ambony dia maharitra mandrakizay, tsy miova ary mandrakizay ny fanahy.
Ny faniriana hitazona ny fanahy ao amin'ny taniny, ny natiora dia nanome ny vatan'ny tsy mety maty azy ho maro isan-karazany ny akanjo izay nofininy tamina vatana iray. Amin'ny alàlan'ity vatana ity no ahafahan'ny natiora manipy ny hafaliany amin'ny fanahy ary manimba ny fahalalana. Ny fahazoan-dàlana dia wira majika izay vokarin'ny voajanahary.
Glamour no ody manokana izay manala ny fanahy. Ny glamour dia mahatonga ny phantom miloko maro be mangarika mba hisintonana, hanangom-peo mampihomehy mampitolagaga manintona, fofona manitra misy fofona manitra, mampisy fahafinaretana mamy mampifaly ny filana ary mamoha ny tsirony, ary mampihetsi-po malefaka mamelana ny rà mandia ny vatana ary entaninny saina.
Ahoana ny fomba voajanahary ny fanahy. Fomba voafandrika mora foana. Manao ahoana ny fomba tsy an-kiato? Mora amin'ny lozam-pifamoivoizana ny mombamomba azy. Ny natiora dia mahalala tsara ny fitazonana ny vahiny azy. Rehefa ny lalao iray dia mitsahatra miala voly, ny iray hafa dia natolotry ny hafetsena izay hitarika ny fanahy ho lalindalina kokoa amin'ny fiainana. Mitohy amin'ny fomba mahatsiravina sy honenana ary fialamboly hatrany amin'ny fiovana maharitra izany ary manadino ny fahamendrehana sy ny herin'ny fanatrehany ary ny fahatsoran'ny fisiany.
Rehefa nigadra tao amin'ny vatana ny fanahy dia mifoha tsikelikely amin'ny fahatsiarovan-tena. Rehefa mahatsapa fa teo ambanin'ny soratry ny enchantress izy io, rehefa nankasitraka ny herin'ny zanany sy ny fahatakarany ny famolavolana sy ny fomba fanaovany azy, dia afaka miomana hiady sy hanakorontana ny fitaovany ireo fanahy. Mihetsika ny tenany ary lasa tsy voaaro amin'ny ody amin'ny tànana.
Ny talisman ny fanahy izay manapotika ny fitsipiky ny enchantress dia ny fahatsapana fa na aiza na aiza misy azy dia maharitra sy tsy miova, tsy mety maty, ka tsy ahafahana mifatotra na haratra na harovana.
Ny fahatsapana ny glamor an'ny paiso. Io no voalohany sy farany izay tsy maintsy resena. Izy io dia mitondra ny fanahy ao ambanin'ny sain'ny fihetseham-po rehetra. Ny fisokafana izay iasan'ny natiora dia ny hoditra sy ny taova rehetra ao amin'ny vatana. Io fahatsapana io dia manana ny fototry ny firaisana tamin'ny misterin'ny firaisana. Ao amin'ny sarivongan'i Laocoon mahafinaritra, sarin'i Phidias ilay olona miady mafy amin'ny afafin'ilay bibilava izay natsipy ny ozitody. Amin'ny fijerena tsy miangatra amin'ny talisman ilay bibilava dia manomboka manjombona.
Iray amin'ireo fomba ampanaovin'ny enchantres ny lela, ny felany ary ny filan'ny vatana, izay avy eo ambanin'ny lanin'ny tsiro ny tsirony. Amin'ny fijerena ny talisman ny fanahy dia mahatonga ny vatana hiaro tena amin'ny fahazahoan'ny tsirony, ary mamela izay tsy hitazomana ny vatana fotsiny ihany ary ampy ho an'ny filany. Ny tsirony amin'ny tsirony avy eo dia manary ny volony ary ny vatana dia manome an'io sakafo io izay ny tsirony anaty ihany no omena.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny mazia ho an'ny zavamaniry dia misy fiantraikany amin'ny fanahy amin'ny alàlan'ny taova fandoroana fofona, ary manjary amboary ny ati-doha mba hamela ny fahatsapana hafa hanalavitra ny saina. Saingy amin'ny fijerena ny talisman ny herin'ny tsilo dia tapaka fa tsy ny olona voan'ny fofona voajanahary dia voasarona ny fofon'aina.
Amin'ny alàlan'ny sofina dia tratran'ny faniriana ny olona. Raha mampiasa io zavamaniry io ny natiora dia mahafatifaty sy manaitra ny fanahy mandra-pahitana azy. Avy eo ny mozika manerantany dia very ny hatsarany. Rehefa maheno ny firindran'ny fihetsiny ny fanahy dia mihaona daholo ny feo rehetra ary tapaka foana io resaka ody io.
Mandritra ny masony dia miteraka fahamailoana ny fijerin'ny lozabe azy. Saingy amin'ny fijerena maharitra ny talisman dia manjavona ny glamor, ary ny loko sy ny endriny dia lasa fototry ny fahitana ny fanahy. Rehefa mahatsapa ny fisaintsainany ny tarehy sy ny halalin'ny zavamananaina ny fanahy dia misaintsaina ny hatsaran-tarehy tena izy ary miaina amin'ny tanjaka vaovao.
Ny fikoronan'ny tànana avy amin'ny natiora dia mitondra zana-kavo roa hafa: ny fahalalana ny fifandraisan'ny zava-drehetra, ary ny fahalalana fa ny zava-drehetra dia Iray ihany. Miaraka amin'ireto wands ireto ny fanahy dia mamita ny diany. Tsy eritreretin'ny tsy fahitana ny fijerin'ny fiainana raha toa ka natao ho an'ny fahazoana ny hevi-diso sy an'izao tontolo izao. Raha tsy hita izay tsy hita ireo zavona sy haizina ireo,
Ilaina ny mitady ilay tena izy aloha, mba ho afa-po amin'ny zavatra tsy misy izy, satria rehefa fantatry ny fanahy ny zava-misy marina dia tsy maintsy mahay manavaka ny tsy izy.
Rehefa manambady sy voafehy amin'ny saina ny saina, dia miteraka glamor ary mihena ny fahaizan'ny fanahy. Toy izany ny zava-dratsy: ny vanim-pahatezerana, ny fankahalana, ny fialonana, ny zava-poana, ny avonavona, ny fitsiriritana ary ny filàna: ny menarana ao anaty coils izay toran'ny fanahy.
Ny fiainana ain'olombelona tsotra dia andiany manelingelina hatramin'ny zaza ka hatramin'ny fahanterana. Isaky ny fahatairana tsirairay dia voatsindrina ary mitombo ny voaly glamor. Vetivety dia hita ny marina. Saingy tsy afa-miaritra izany. Nikatona indray ny zavona. Ary hafahafa, ireo fahatairana ireo dia miaraka amin'ny fanaintainana sy ny fahafinaretana mahatonga azy ireo ihany. Ny olombelona dia manohy mihetsika eo amin'ny onjan-dàlana, nentina etsy sy eroa, nivezivezy ho lasa eritreritra, nidina tamina vatolampy misavoritaka na nijaly tao anaty alahelo sy famoizam-po, mba hitsangana indray ary ho zaka amin'ny alalàn'ny fahafatesana ho any ranomasina tsy fantatra, ny Beyond, toerana mankaiza ny zavatra rehetra izay teraka. Dia miverimberina foana eo amin'ny fiainana ny fanahy.
Ny vatana tamin'ny andro taloha dia nekena ho mpanambara ny zava-miafin'ity tontolo mahafinaritra ity. Ny tanjon'ny fiainana dia ny hahatakatra sy hahatsapa ny fanambarana tsirairay avy: ny famafana ny famirapiratan'ny enchantres amin'ny alàlan'ny fahatsiarovan-tena ny fanahy: manao ny asan'ny fotoana, mba hahafahan'ny fanahy manohy ny diany. Amin'izany fahalalana izany ny fanahy dia manana fahatsiarovan-tena mitony ary milamina ao anatin'ny tontolo mamirapiratra.